5 cuntooyin caafimaad leh oo kaloori hooseeya si ay u dhex galaan cuntadeena - Hagaajinta caafimaadkaaga - XIDHIIDHKA
ACCUEIL » rasiidhada »5 cuntooyin caafimaad leh oo kaloori ah si ay u dhex galaan cuntadeena - Horumarinta Caafimaadkaaga
5 cuntooyin caafimaad leh oo kalooriyaal ah si ay u dhex galaan cuntadeena - Hagaajinta Caafimaadkaaga
Miisaanka culus wuxuu ku xiran yahay inta aad cunayso. Waxaad yareyn kartaa qaybaha waxayna ku darsataa dhowr saacadood oo jimicsi ah maalintaada, haddii aadan si fiican u cunin, dadaaladu waa wax aan waxba tarayn. Ma jiraan wax shaki ah oo ku saabsan cuntooyinka caafimaadka leh oo aad ku fiicnaan lahayd inaad isticmaasho?
Waa kuwan fursadaha qaarkood. Iska fiirso oo isku day inaad ku baabbi'iso. Haddii qaar aysan kugu dhicin, isku day in aad cunto cunid sababtoo ah natiijooyinka waxay u qalantaa.
Cuntada ugu horeysa ee caafimaadka leh ee aan rabno inaan kugula talino waa rooga. Khudradda cagaaran waxaa lagu gartaa dhadhan qafiif ah oo dhadhan qaas ah. Intaas waxaa dheer, tani waa hodan fibre, potassium, vitamins A, C iyo K. Sida kalooriyooyinka, waxaa ku jira 4 koob oo keliya, taas oo ka dhigaysa saldhig u fiican ee cawska iyo jiiska. saladh.
Nafaqadeeda waxay ka dhigtaa doorasho weyn oo loogu talagalay yaree dufanka iyo xakamaynta kolestaroolka. Ku noqoshada hodan ku ah antioxidants, waxay caawisaa ilaalinta quruxda dabiiciga ah iyo ladagaallanka waxyeellada deegaanka.
Waxaad u isticmaali kartaa si joogto ah intaad rabto. Si loo yareeyo dhadhanka, waxaad isticmaali kartaa liin yar ama waxaad ku dari kartaa cuntooyinka kale ee uumi gelinaya.
Mid ka mid ah cuntooyinka kale ee caafimaadka leh waa inaad si joogto ah ugu dartaa cuntadaada waa asparagus. Marar badan ma cuntaa? Haddii jawaabtu tahay "run ahaantii" markaa way fiicnaan doontaa inaad si joogto ah u isticmaasho.
Waxa ugu horeeya ee la ogaado waa in koobdhir waxaa ku jira qiyaasaha 27, sidaas darteed qadar yar. Intaas waxaa dheer, khudraddan waa daaweyn maqaar oo dabiici ah oo ka tirtiraya dareeraha nidaamkaaga.
Haddii aad sakhraan khamri badan ama haddii aad leedahay cunto xun, asparagus waxay noqon doontaa doorasho wanaagsan oo lagu baabi'inayo aalkolada iyo sumoobidda sunta. Khudradani waxay kaloo ku badan tahay fitamiin A, E, folic acid, birta iyo borotiinka.
Waan ognahay in dhadhankiisa ay dad badani ka dhaadhicin karto in ay u isticmaalaan. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay waqti yar oo aad ku qabsato. Faa'iidooyinka aad heli karto waa kuwo xiiso leh oo kuu oggolaanaya inaad isku daydo oo aad isku daydo, ma u malaynaysaa?
Ujeedada akhrinta: Sababaha 6 ee loo cuno asparagus iyo talooyinkeena wax lagu karsado
Markaad ka hadlaysid cuntooyinka caafimaadka leh, waa wax aan macquul aheyn in la xuso broccoli. Tani waxay sabab u tahay sababo dhowr ah: waa dhaqaale, fududahay in la diyaariyo iyo hodan ku ah nafaqooyinka. Sida kalooriyada, waxay ku jirtaa 31 koob uun.
Xaqiiqdii, broccoli waxaa loo tixgeliyaa cunto sare, sidaas darteed waxaa lagula talinayaa in la isticmaalo dhowr jeer toddobaadkii. Waa hodan ku jirta fitamiino, macdan, fibre iyo antioxidants. Waxaa intaa dheer, waxaa loo tixgeliyaa in ay ka caawiso dagaalka le kansarkaxitaa haddii aadan u baahneyn in ay waxyeelo u geysato xaaladan si aad u cuntid.
Si ka fiican, barokooliyada keligood ayaa ah mid aad u dhammeystiran. Haddii aad rabto inaad siiso dhadhan dheeraad ah, ku dar jiis, yogurt iyo cantoobo kale oo khudaar ah. Natiijadu waxay noqon doontaa natiijo salad delicious iyo aad u nafaqo leh iyada oo aan wax khatar ah u ah tiradaada.
Si looga fogaado kaloriinta sii kordhaya, waxaa lagula talinayaa in la iska ilaaliyo in lagu daro xilliga qallalan. Xulo saliidda iyo caano fadhi oo iska ilaali majones iyo dharka salad ganacsi.
4. Midhaha cas
Koox kale oo ah cunto caafimaad leh waa miro, ugu fiicana waa in aad leedahay doorashooyin dhowr ah. Raspberry, blackberries iyo strawberries waa saddex tusaale oo wanaagsan waana inaad cuntaa inta badan ee suurtogalka ah.
Cuntooyinkan ayaa hodan ku ah antioxidants noocyo kala duwan. Taasi waa sababta, waxay u soo baxaan inay noqdaan dagaalyahan wanaagsan oo ka dhan ah bararka, kansarka iyo dhibaatooyinka wadnaha. Intaa waxaa dheer, waxay xoojinayaan habka difaaca jirka iyo xoojinta caafimaadkaaga.
Nooc koob oo ah nooca berry ah waxaa ku jira qiyaasaha 32, si aad ugu dhigi karto si ammaan ah.
Ma ogtahay? Xeeladaha ugu fiican ee 5 si ay ula dagaallamaan caloosha
Shaki la'aan, mid ka mid ah cuntooyinka caanka ah ee ugu caansan sanadahan dambe waa shaah. Aqoonta faa'iidadiisa waxay dib ugu soo noqotaa dhaqamada hore, sida kuwa Shiinaha ama Japan.
Ka mid ah shahradaha ugu faa'iido leh ee caafimaadku waa cagaar, cad, madow iyo oolong oolong. Ha ka welwelin kalooriyeyaasha - kuma jiraan kaloori haddii aadan ku darin macaan, taas oo aanan ku talineynin.
Iyada oo ku xiran nooca shaaha la doortay, waxaad awoodi doontaa inaad ka faa'iideysato mid ama mid kale oo ka mid ah manfacyada. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa taasdhammaantoodna waa hodan polyphenols, nooc ka mid ah antioxidant oo haya unugyadaada caafimaad.
Waa sidee cuntooyinkaas oo badanaa cunaan? Noo soo dir raashinka ugu fiican.
5 Cuntooyinka caafimaadka leh ee dejiya cabsida cunada
Marka lagu daro cuntooyinka caafimaadka leh ee dejiya walbahaarka cunida cuntada, waa inaan raacnaa talooyinkan. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/5-aliments-sains-et-hypocaloriques-a-integrer-dans-notre-regime/
Isku day daraasadan digaag leh ee biirka! - Hagaajinta caafimaadkaaga
Caanaha Vegan leh avocado iyo oregano - Hagaajinta caafimaadkaaga